Wacdiyahii 12, Kitaabka Quduuska Ah - Biblepage.net
Oo naftayduna Rabbigay aad ugu farxi doontaa, Oo waxay ku rayrayn doontaa badbaadintiisa
Buugga Bilowgii Baxniintii Laawiyiintii Tirintii Sharciga kunoqo Yashuuca Xaakinnada Ruud Samuu'eel kowaa Samuu'eel labaa Boqorradii kowa Boqorradii laba Taariikhdii kow Taariikhdii lab Cesraa Nexemyaah Esteer Ayuub Sabuurradii Maahmaahyadii Wacdiyahii Gabaygii sulaym Ishacyaah Yeremyaah Baroorashadii y Yexesqeel Daanyeel Hoosheeca Yoo'eel Caamoos Cobadyaah Yoonis Miikaah Naxuum Xabaquuq Sefanyaah Xaggay Sekaryaah Malaakii Matayos Markos Luukos Yooxanaa Falimaha rasuul Rooma 1 Korintos 2 Korintos Galatiya Efesos Filiboy Kolosay 1 Tesaloniika 2 Tesaloniika 1 Timoteyos 2 Timoteyos Tiitos Filemon Cibraaniyada Yacquub 1 butros 2 butros 1 yooxanaa 2 yooxanaa 3 yooxanaa Yooxanaa Muujintii Cutubka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aayadda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Version Kitaabka Quduuska Ah
1 Haddaba wakhtiga dhallinyaranimadaada Abuurahaaga xusuuso intaan maalmaha xumu kuu iman, ama ayan kuu soo dhowaan sannadaha aad odhan doonto, Sannadahan kuma istareexo,
2 iyo intaan qorraxda, iyo iftiinka, iyo dayaxa, iyo xiddiguhuba ay wada madoobaan, ama intaan daruuruhu roobka ka daba noqon,
3 iyo inta kuwa guriga dhawraa ay gariiraan, oo nimanka xoogga badanuna ay soo gotaan, oo kuwa wax shiidaana ay tiradooda yar aawadeed shuqulka u joojiyaan, oo kuwa daaqadaha wax ka fiiriyaana ay madoobaadaan,
4 iyo inta albaabbada jidadka lagu xidho, iyo inta sanqadha shiididdu ay gaaban tahay, oo shimbirta cideeda lagu tooso, oo gabdhaha muusikaduna ay wada taag darnaadaan.
5 Waxa sarreeya ayay ka baqi doonaan, oo jidadka dhexdoodana waxyaalo cabsi ah ayaa jiri doona, oo geedka yicibtu waa ubxin doonaa, oo koronkorraduna way isculaysin doonaan, oo damacuna wuu baabbi'i doonaa, maxaa yeelay, binu-aadmigu wuxuu tagaa hoygiisa daa'imka ah, oo kuwa baroortaana jidadkay warwareegaan.
6 Abuurahaaga xusuuso intaan xadhigga lacagta ahu kala go'in, ama aan maddiibadda dahabka ahu kala jabin, ama aan jalxaddu isha biyeed agteeda ku burburin, ama aan giraangirta ceelku jabin,
7 iyo intaan ciiddu dhulka ku noqon siday horeba ahayd, oo ruuxuna ku noqon Ilaahii horeba siiyey.
8 Wacdiyuhu wuxuu leeyahay, Waa wax aan waxba tarayn, wax waluba waa wax aan waxba tarayn.
9 Oo haddana wacdiyuhu xigmad buu lahaa, oo weliba dadkuu aqoon baray. Wuxuu aad uga fikiray, oo baadhay, oo isku hagaajiyey maahmaahyo badan.
10 Wacdiyuhu wuxuu doonay inuu soo helo erayo la aqbalo iyo wixii si qumman loo qoray oo ahaa hadal run ah.
11 Erayada kuwa xigmadda lahu waa sida wax wax muda oo kale, oo maahmaahyada la soo ururshayna waa sida musmaarro la adkeeyey; adhijir qudha ayaa bixiyey.
12 Oo weliba, wiilkaygiiyow, waxyaalahan ku waano qaado. Buugag badan samayntoodu innaba dhammaad ma leh, oo waxbarashada badanuna jidhkay daalisaa.
13 Xaalkan soo koobiddiisii waa tan. Waa la wada maqlay. Ilaah ka cabso, oo amarradiisana dhawr, waayo, taasu waa waxa binu-aadmiga oo dhan u gudboon.
14 Waayo, Ilaah wuu xukumi doonaa shuqul kasta, iyo wax kasta oo qarsoon, ha fiicnaadeen ama ha xumaadeene.